30 Statistics Statistics I Kwesighi Iche | Martech Zone
Akwụkwọ ozi ọ bụla nke na-eme ka ndị na-ere ahịa laghachi na isi nke mbọ ha siri ike. Anyị na ndị ahịa na-anọdụ ala taa ma na-agagharị site na usoro nke usoro atụmatụ dị ukwuu… na-emepe emepe n'oge na-adịbeghị anya, na-adịkarị mkpa ma dị mkpa na ikpo okwu kachasị maka ọchụchọ. Site na ntọala ahụ dị ebe ahụ, na-ahụ na e debere usoro mkpanaka. Na yana nke ahụ, ịmepụta mmekọrịta mmadụ na ibe gị iji wulite ikike na mmetụta - na-eme ka ndị mmadụ laghachi na azụmaahịa gị n'ịntanetị. Ma, n'ezie, na-etinye ihe osise site na infographics na vidiyo maka ndị ọbịa na-arịda ha.
Optimind etinyela foto a nke ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ ahịa dijitalụ 30 iji buru n'uche na ịntanetị na ntanetị ecommerce.
Ihe odide a bụ Optimind, ụlọ ọrụ Phillippines siri ike. Maka ọrụ ahịa dijitalụ, ị nwere ike ịga www.optiminddigital.com. Maka web imewe na A, nleta www.myoptimind.com.
Aug 29, 2013 na 9:15 PM
Ndị na-ere ahịa ahịa ahịa na ụlọ ọrụ ga-amụta ọtụtụ ihe na post a!
nwanyị nwe nwanyị
Sep 12, 2013 na 8: 22 AM
Nwere ike inye koodu ahụ ka ị degharịa ihe omuma a.
Dee 24, 2013 na 2: 17 AM
Nnọọ uru bara uru stats maka ọzọ na-aga na nnọọ ihe ọmụma!